စတီဗင် Phillipson က, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအထောက်အထားနှင့်ဆက်စပ်သော obsessive သံသယ၏နားလည်မှုနှင့်ကုသမှု, Ph.D ဘွဲ့ကို - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
စတီဗင် Phillipson, Ph.D ဘွဲ့ကိုအားဖြင့်, လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးဟာသိသိသာသာဆိုင်ရာ obsessional သံသယများ၏နားလည်မှုနှင့်ကုသရေး
ဒီကုထုံး HOCD တဦးတည်းအများဆုံးကု သ. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်နေပါတယ်သတိပြုပါ။
စတီဗင် Phillipson, Ph.D ဘွဲ့ကိုအားဖြင့် သိမှု - အပြုအမူဆိုင်ရာစိတ်ပညာကုထုံးဌာန (ဆောင်းပါးပါ LINK)
ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်မှာ Seinfeld ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ setting ကိုတစ် masseuse ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကဇာတ်ကောင်များထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သော George Costanza သည်သူ၏အသက်တာ၏ပထမဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနှိပ်ခံရန်သဘောတူခဲ့သည်။ Jerry Seinfeld က၎င်းကိုအလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီးအကျိုးရှိမည်ဟုပြောရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပြုခဲ့သည်။ ဂျော့ခ်ျသည်ဤရုံးခန်း၏စောင့်ဆိုင်းခန်းတွင်ရှိသည်။ သူသည်ငယ်ရွယ်ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ကြိုဆိုရန်မျှော်လင့်သော်လည်းသူ၏အနှိပ်သည်ကုထုံးသည်အဖြူတီရှပ်နှင့်ဘောင်းဘီတိုတိုတွင်ကြီးမားပြီးကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားသည့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသူဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရ။ သူအံ့သြသွားသည်။ ဂျော့ခ်ျသည်အစပိုင်းတွင်တွန့်ဆုတ်နေသော်လည်းဂျယ်ရီ၏အနှိပ်ခံခြင်းနှင့်အတူသွားရန်တိုက်တွန်းသည်ကိုသူတွန့်ဆုတ်သည်။
နောက်မြင်ကွင်းတွင်ဂျော့ချ်သည်ရုံးမှထွက်ခွာသွားခြင်းကိုအလွန်တရာအရေးတကြီးသဘောထားဖြင့်တွေ့ရသည်။ သူကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရစကားပြောဆိုရန်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းအတွက်ဂျယ်ရီနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်၊ အနှိပ်ခံခြင်းတွင်သူ“ လှုပ်ရှားသည်” ဟုထင်သည်ဟုဝန်ခံသည်။ ကြည့်ရတာအနှိပ်ခံနေစဉ်အတွင်းဂျော့ခ်ျသည်စိတ်သက်သာမှုရစေပြီးစိတ်အားတက်ကြွစေခဲ့သည်။ ဒါဟာဂျော့ခ်ျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွအချို့သောကန ဦး အရိပ်လက္ခဏာကြုံတွေ့ခဲ့ကြပေမည်ကြောင့်အချို့သောမရေရာဒွိဟအနည်းငယ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်ပုံရသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်သူသည်ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်လေဖြတ်သွားပြီးသူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုကိုယခုမေးခွန်းထုတ်နေပြီဖြစ်သည်။
ဒီဟာသဇာတ်လမ်းက OCD ဝေဒနာသည်အချို့အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့်နာကျင်မှုဝေဒနာများကိုထင်ဟပ်စေသည်။ စွဲလမ်းမှုသံသယ၏အသုံးအများဆုံးပုံစံတစ်မျိုးမှာလိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုနှင့်သေချာစွာအဖြေရှာရန်မစွမ်းနိုင်ခြင်းပါဝင်သည်။ အမှန်တကယ်အလွန်မကြာခဏဤကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအတွေး (ဆိုလိုသည်မှာ, spike) နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်သည့်အလွန်အလွန်ဘုံ obsessive သံသယ, ဆက်ဆံရေးသည်လက်ရှိတွင်ကျိန်ဆို။ ပူဇော်သည်ဖြစ်စေမမူတည်သည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ခိုင်မာအောင်လုံလောက်သောသိသိသာသာတည်ထောင်ရန်အဆုံးမဲ့အားထုတ်မှုသည်၎င်း၏ဆက်လက်တည်ရှိခိုင်လုံဖို့လုံလောက်တဲ့သိသိသာသာ။ ငါသူ့ကိုလုံလောက်စွာချစ်သလား။ သူသို့မဟုတ်သူမအလုံအလောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါသလား ကျွန်ုပ်၏ဤလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ရေးအရလုံလောက်သောဆက်ဆံရေးရှိပါသလား။ နောက်ဆုံးတော့ငါလိင်တူချစ်သူဖြစ်လိမ့်မယ်ကတည်းကငါဒီလူနှင့်အတူမကွဲနှင့်ငါ့စစ်မှန်သောကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေသင့်သည်မဟုတ်လော ဤမျှမြင့်မားသောစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုမရှိပါကဤအတက်နှစ်မျိုးသည်အဘယ်ကြောင့်တိုက်ဆိုင်သွားမည်ကိုနားလည်ရန်မခက်ခဲပါ။ လူတစ် ဦး သည်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကျူးလွန်သောဆက်ဆံရေးတွင်ပါ ၀ င်ပြီးရုတ်တရက်သူတို့၏လွှမ်းမိုးသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုကသူတို့၏လိင်မှုဆိုင်ရာမည်သည့်အပြုအမူများပါ ၀ င်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရန်လိုအပ်ခြင်းသည်ရုတ်တရက်ဆိုလျှင်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပေါ်၎င်းတို့၏စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများသည်သဘာဝကျလိမ့်မည် ။
OCD spike themes များအများစုနှင့်အတူ spike ၏ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်မကင်းသောသဘောသဘာ ၀ မှာအထင်အရှားပင်ဖြစ်သည်။ မိခင်တစ် ဦး ၏မွေးကင်းစကလေးကိုနှိပ်စက်ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်တတ်သည့်အတွေးများသည်များသောအားဖြင့် OCD ပုံစံသို့မဟုတ်မိဘအသစ်များကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည့်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သောအတွေးပင်အဖြစ်အလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်သည်။ အရပ်သားများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများသည်တံခါးပိတ်မှအကူအညီများကိုစာချုပ်ချုပ်ရန်ကြောက်ရွံ့ခြင်း၏အဓိပ်ပါယျမရှိသောသဘာဝြဖစ်မှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ကြသည်။ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာနှင့်ခံစားနေရသောခံစားချက်များကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုခံစားခဲ့ရပြီး၊ ပိုမိုရိုးရာထုံးစံအတိုင်းဆူးခေါင်းစဉ်များကဆက်ဆံရေးနှင့် / သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုဆန့်ကျင်ဘက်များနှင့်ဆင်တူသည်။ အဓိကခြားနားချက်မှာ spike themes နှစ်ခုဖြင့်“ OCD” ကိုကန ဦး ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဟုယေဘုယျအားဖြင့်မယူဆပါ။ ရလဒ်အနေနှင့်ဤ spike ခေါင်းစဉ်များရှိသည့်လူအများစုတို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ရှည်လျားပြီးနာကျင်မှုရှိသောသမိုင်းကြောင်းရှိပြီးအခြားသူများထံမှအကျိုးမရှိသောလမ်းညွှန်မှုကိုရှာဖွေပြီးတရား ၀ င်ပုံရသည့်ပြissuesနာများကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားသည်။ တရားဝင်ပconflictိပက္ခ (ဆိုလိုသည်မှာဆက်နွယ်မှုသို့မဟုတ်တိမ်းညွတ်မှုရှုပ်ထွေးမှု) နှင့် OCD ဝေဒနာသည်များ၏ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ကူညီနိုင်သည့်မြင်သာထင်သာသောကွဲပြားခြားနားမှုပြောင်းလဲမှုသည်ဝေဒနာခံစားနေရသောလိုအပ်ချက်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်သည်။ မေးခွန်း
လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်မှန်ကန်သောဆက်ဆံရေး၌မဖြစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ spikes ဘုံ၌များစွာသောသဘောတူညီချက်ရှိသည်။ သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစု ၀ င်များနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များသည်တစ်စုံတစ် ဦး အားတစ် ဦး တစ်ယောက်အားဆက်နွယ်မှုရှိရန်၊ သို့မဟုတ်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းပုံစံကိုလိုက်စားခြင်းရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်သောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချရန်ကူညီခြင်း၏မြင့်မားသောကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုဖျော်ဖြေလိုစိတ်များကြသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ကျွမ်းကျင်သူများမဟုတ်သောအဘို့အတစ်စုံတစ် ဦး ကလိင်တူချစ်သူစေသည်သောအရာကိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် variable တွေကိုသိသိသာသာကြားဆက်ဆံရေးဖြစ်စေဘို့ OCD ခံစားနေရပြီးများအတွက်မှားယွင်းသောလမ်းညွှန်မှုနှင့်သတင်းမှား၏များစွာသောသဘောတူညီချက်ပေးခွင့်ရှိပါတယ်။ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွင်လူနာတစ် ဦး ၏မိခင်ကသူ့သမီးအား“ မင်းမှာဒီမေးခွန်းတွေအများကြီးရှိတယ်၊ မင်္ဂလာဆောင်ခါနီးပြီဆိုလျှင်ကြီးမားတဲ့ပြproblemနာရှိရမယ်။ ” ဤတုံ့ပြန်ချက်များ၏အလေးချိန်သည်နောက်ဆုံးတွင်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးတစ်ခုရပ်တန့်သွားစေသည်။ အခြားဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင်လိင်တူချစ်သူတစ် ဦး သည်လိင်တူချစ်သူဖြစ်လိမ့်မည်ဟူသောကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့်ငရဲသို့သွားနေကြောင်းကျောင်းတာဝန်ရှိသူတစ် ဦး အားဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့သည်။ ယခင်အထက်တန်းကျောင်းနည်းပြသည်သူ့အားထိုင်ချခဲ့ပြီးသူထွက်ပေါ်လာသည့်ဖြစ်စဉ်တွင်သူသည်ထပ်တူညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်ဟုဝန်ခံခဲ့သည်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ ဒီမှားယွင်းနေပေမယ့်အထောက်အပံ့ပေးတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကလအနည်းငယ်ကြာတိုးတက်မှုဆီကိုရောက်သွားစေတယ်။ ပြောစရာရှိတာကဒီခေါင်းစဉ်နှစ်ခုဟာငါတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘ ၀ မှာများပြားလှပါတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤမေးခွန်းများ၏မူလရင်းမြစ်သည် OCD နှင့်ဆက်နွယ်ကြောင်းစနစ်တကျခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိဘဲတိကျသောအဖြေများမရှိသောမေးခွန်းများအတွက်လမ်းညွှန်မှုကိုပေးရာတွင်ကမ်းလှမ်းခံရခြင်းအတွက်ကြီးမားသောအကူအညီဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရန်နားလည်နိုင်သည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သော“ အကူအညီနှင့်လမ်းညွှန်မှု” သည်ပြtheနာကိုအမှန်တကယ်ပိုဆိုးစေပြီးအမှန်တကယ်ဖြစ်နေသောပြfromနာမှအာရုံပျံ့လွင့်စေသည်။
OCD ခံစားနေရသူများသည်လက်များကိုဆေးကြောသန့်စင်သည်ဟုခံစားရသည်အထိသို့မဟုတ်ခံစားမှုမပြည့်မချင်းမီးခလုတ်ကိုပိတ်လိုက်သည်အထိသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအမှားများပြုလုပ်ကြသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကိုသူတို့လုပ်ငန်းပြီးပြီလားဆိုတာကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်။ ဦး နှောက်၏ကြောက်ရွံ့မှုစင်တာ (amygdala) ကိုယုတ်လျော့စေသောကြောင့် OCD ဝေဒနာရှင်၏ပြုမူဆောင်ရွက်မှုကိုထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းပြချက်မရှိသောနည်းလမ်းဖြင့်ယနေ့ OCD ၏အယူအဆသဘောတရားအရသတ်မှတ်ထားခြင်းကြောင့်မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝေဒနာသည်သည်သူသို့မဟုတ်သူမ၏စိုးရိမ်မှုများ၏ယုတ္တိမဲ့သောသဘောသဘာဝကိုလုံးလုံးလျားလျားသတိပြုမိဆဲဖြစ်သည်။ OCD ကိုမတွေ့ကြုံသောသူများသည်၎င်းတို့သည်အလင်းကိုရိပ် မိ၍ ထင်နေသည်ဟုထင်သောကြောင့် switch ကိုတစ်ကြိမ်လှန်သည်။ သို့မဟုတ်သူတို့ကသူတို့လက်၌ဖုန်ဖြစ်သည်ဟုမထင်သောကြောင့်ရေကိုပိတ်ထားသည်။ OCD ဝေဒနာသည်မဟုတ်သူများသည်ဤတာ ၀ န်များကိုပြီးမြောက်စေရန်သိနားလည်နိုင်စွမ်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကိုမှီခိုသည်။ OCD ဝေဒနာသည်များသည်အမူအကျင့်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်၍ ဆက်လက်၍ မပြည့်စုံမှုကြောင့်မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေသည်သို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခံရသည်အထိ ဆက်လက်၍ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ သတိပြုရန်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်အချက်ပြခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည့် ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းသည်အမှားအယွင်းများကြောင့် OCD ဝေဒနာသည်သည်သူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုငြိမ်သက်မသွားမချင်းထွက်ပြေးခြင်းသို့မဟုတ်တုန့်ပြန်ခြင်းတုန့်ပြန်မှုပြုလုပ်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ လက်တွေ့မဟုတ်သောလူ ဦး ရေတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်မှုရှိရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည်ဤဖြစ်ရပ်များတွင်အတွေ့အကြုံပေါ်အခြေခံသည်။ ဤအခြေအနေများနှင့်အတူယေဘုယျအားဖြင့်လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်သူမြားကိုမိတ်ဖက်နှင့်အတူတည်းခိုသောသူမြားကိုရှေးခယျြမှုလမ်းညွှန်ဖို့စိတ်ခံစားမှု variable တွေကိုအားကိုးရန်ပေးထားသောအဖြစ်ယူဆနေသည်။ အဆိုပါလိင်တူချစ်သူ spiker နှင့်ဆက်ဆံရေး spiker အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပြီး, ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အမျိုးအစားများကိုဆုံးဖြတ်ရန်အပေါ်တစ် ဦး ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အခြေခံရှိကွောငျးပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိထားမိကြသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သူတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုလမ်းညွှန်အဖြစ်အသုံးမပြုဘဲဆက်ဆံမှုကိုကျူးလွန်ရန်သို့မဟုတ်လိင်ကွဲဆက်ဆံခြင်းကိုပြုမူရန်အလွန်တွန့်ဆုတ်လေ့ရှိသည်။ ဦး နှောက်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းသည် OCD ဝေဒနာသည်များအတွက်မှားယွင်းစွာလောင်ကျွမ်းနေသောကြောင့်လမ်းညွှန်မှုရှာခြင်းအတွက်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိသောနည်းလမ်းကိုသူတို့စွန့်လွှတ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ဒီတစ်ခါလည်းငါ၏အနာကျင်မှုသည်ဤစစ်မှန်သောမေးခွန်းများကိုရှိခြင်း၏သဘာဝ outgrowth ဖြစ်ပါသည်
ဟေး၊ အကယ်၍ သင်သည်တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်ပြိုကွဲရန်ကြံစည်လျှင်သင်အလွန်နာကျင်မှုနှင့်ဝေဒနာများစွာခံစားရလိမ့်မည်ဟုသဘာဝမကျပေလော။ မှားယွင်းသောအကြောင်းပြချက်များအရပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွင်ကျန်နေသူသည်ဤဝေဒနာနှင့်အပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရမည်မဟုတ်လော။ လာမယ့်ဖြစ်စဉ်သည်တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသောအချိန်မဟုတ်လား။ ... ကျွန်ုပ်မှာ OCD မရှိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤတွင် (ဆိုလိုသည်မှာကုထုံး) ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူမေထုန်စစ်မှန်သောဘဝနှင့်ရင်ဆိုင်ရမည့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် AID ကိုတံခါးခေါက်မှမရရှိနိုင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတွင်သက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့ကုထုံးတွင်မေးခွန်းများမေးလေ့ရှိသောဤမေးခွန်းများကိုမေးမြန်းသူများအတွက်လည်းအထောက်အထားမရှိပါ။ ဤကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောမေးခွန်းများသည်ဤအမှန်တကယ်ပြissuesနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါအစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်မည်သည့်အရာများကြုံတွေ့ရမည်ကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမေးခွန်းများကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုပြorderနာဟုမယူမှတ်ကြောင်းသေချာစွာသက်သေပြရန်နည်းလမ်းမရှိချေ။ အကယ်၍ တကယ့်လိုအပ်ချက်တစ်ခုမှာဆက်ဆံရေးအကြံပေးခြင်းဖြစ်သည်။ မဖြေရှင်းနိုင်သောဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်မဖြစ်နိုင်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးတွင်ဤကုသမှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့်အမှန်တကယ်ပြissuesနာများကိုလျစ်လျူရှုခံနေရသောဖြစ်နိုင်ခြေကိုလက်ခံရန်အခွင့်အလမ်းများကျန်နေခဲ့သည်။
အဲဒီနှစျခုဆူး themes များဘုံအတွက်ဤမျှလောက်ရှိသည်နှင့်ဒါအလွယ်တကူပူးတွဲဖြစ်ပေါ်လေ့ကတည်းက, ငါသည်ဤဆောင်းပါးသည်ဤပြဿနာများ၏ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူစိန်ခေါ်သူအများအပြားပုဂ္ဂိုလ်များများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေလမ်းညွှန်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။
ဤ OCD ပုံစံဖြင့်ဝေဒနာသည်အများစုသည်လုံးဝရိုးရာနှင့်ပconflictိပက္ခမရှိသောကလေးဘဝနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမုန်းတီးမှုများနှင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနဲ့ဆက်နွှယ်နေတဲ့မယိမ်းယိုင်တဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုတစ်သက်တာဟာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာကောင်းလောက်အောင်သူတို့လိုအပ်တာကြောင့်အလိုအလျောက်ပြတ်တောက်သွားသည်၊ အစောပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏ရှုပ်ထွေးသည့်စံတစ်ခုမှာလိင်နှစ်မျိုးစလုံးရှိကလေးငယ်များသည်သဘာဝတူညီသောလိင်စူးစမ်းလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်လိုသည့်သဘောထားဖြစ်သည်။ ဤဘုံသဘောထားသည်ဘဝ၏ဤထိခိုက်လွယ်သောဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောဤဆူးခေါင်း၏ပျံ့နှံ့နေသောသဘောသဘာဝကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှစ်လယ်ပိုင်းမှအစောပိုင်းအရွယ်ရောက်သော်တစ်ချိန်ချိန်တွင် OCD စတင်ခြင်းသည်အများအားဖြင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုများနှင့်လိင်တူချစ်သူဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောအယူအဆတို့ဖြင့်စတင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်အောက်ပါအချက်သည်ဝေဒနာသည်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုကိုခိုင်မြဲစွာထူထောင်ရန်နိဂုံးချုပ်အားရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွင်းပိုင်းသိမှုရှာဖွေခြင်းကိုအဆုံးသတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဝေဒနာသည်များစွာသည်အကြွင်းမဲ့မျှော်လင့်ချက်မဲ့သည့်အဖြေကိုအဆုံးမဲ့ရှာဖွေကြသည်။ နာကျင်စေသောမေးခွန်းရှိနေသည်ကိုသတိမပြုမိစေရန်လူများသည်လိင်တူသူချင်းများနှင့်မျက်လုံးချင်းမဆုံတော့ပါ။ အချို့သောရှားရှားပါးပါးကိစ္စရပ်များတွင်လူပုဂ္ဂိုလ်များသည်ရှာဖွေမှုကိုပြီးမြောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရှာဖွေရန်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုအမှန်တကယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဒီလူတွေကသူတို့တွေ့တဲ့အခါလှုံ့ဆော်မှုကိုတွေ့ရင်သူတို့ကလိင်တူချစ်သူတွေလို့ထင်ကြတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်တွေ့ဆုံမှုမှပိတ်ထားလျှင်၎င်းတို့သည်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်ဟုခံစားရသည်။ ကံမကောင်းစွာပင်ဤကဲ့သို့သောအပူတပြင်းလုပ်ရပ်များသည်မေးခွန်းများ မှလွဲ၍ ဘာမျှမရှိပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်, စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးသံသယဆန့်ကျင်ဘက်သို့မဟုတ်တူညီသောလိင်၏အဖွဲ့ဝင်များကကြည့်ရှုနေစဉ်, နက်ရှိုင်းစိစစ်နှင့်တကွ, သူတို့ရဲ့နှိုးဆွမှုအဆင့်ဆင့်ကိုစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီအပူတပြင်းကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွင်းမှာ OCD ခံစားနေရသူရဲ့ရှာဖွေမှုကိုပြန်လည်ပေးဆပ်မှုအဖြစ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာမရေရာမှုအဆင့်ဆင့်ကိုထုတ်ပေးသည်။ “ ငါတို့လေ့လာလေလေ၊ များများမေးလေလေ” ဟူသောရှေးဆိုရိုးစကားသည်ဤတွင်ဆက်ဆက်သက်ဆိုင်သည်။
လူ့လိင်ဖြစ်စဉ်ကိုထိရောက်စွာလုပ်ကိုင်ရန်အပန်းဖြေခြင်းနှင့်နှိုးဆွမှုနှစ်ခုလုံးပေါင်းစပ်ထားသောအတွေ့အကြုံသည်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်နှိုးဆွခြင်းတို့သည်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်သီးသန့်အတွေ့အကြုံများဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ နှိုးဆွရန်ကြိုးပမ်းမှုနှင့်ဆက်နွှယ်သောမည်သည့်အပူအပင်မှအဘယ်ကြောင့်မသက်မသာဖြစ်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုသည်ဝိရောဓိဖြစ်စေသောတန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာသည်။ လိင်တူချစ်သူများသည်လိင်ခြားသူများ၏လိင်စိတ်နိုးထလာစေရန်သူတို့၏အစွမ်းကိုအသုံးချရန်အလွန်ကြိုးစားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံလူတစ် ဦး အားနှိုးဆွခြင်းမပြုရန် ပို၍ အပူတပြင်းကြိုးစားလေလေနိုးကြားမှုအတွက်အလွယ်တကူမှားယွင်းနိုင်သည့်သူတို့၏ပေါင်ခြံတွင်အာရုံခံစားမှုပိုမိုများပြားလာနိုင်သည်။ ငါမကြာခဏအထီးနှင့်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး စလုံးလူနာနှစ် ဦး စလုံးအညီအမျှကြုံတွေ့သော "အစာအိမ်တုံ့ပြန်မှု" အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ နည်းနည်းနှိုးဆွမှုအရိပ်အမြွက်ဖော်ပြနိုင်သည့်မည်သည့်အချက်ပြကိုမဆို ဦး နှောက်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအတွေ့အကြုံကိုတွေ့ရှိနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အကယ်၍“ လိင်တူချင်းချစ်သူ” သည်လိင်တူသူတစ် ဦး ကိုတွေ့မြင်။ သူတို့၏ပေါင်ခြံတွင်လုံးဝကြားနေအာရုံခံစားမှုရှိမရှိစစ်ဆေးခဲ့ပါက၎င်းတို့သည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ခံစားခွင့်နှင့်သူတို့၏အရည်အချင်းမပြည့်မှီသောအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ လိင်တူဆက်ဆံလိုသည်။ သူတို့ရဲ့ပေါင်ခြံ၌ဤအမှန်တကယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံမကြာခဏသူတို့ကဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနေပေမယ့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်း၏အမှန်တကယ်ပေါ်ထွန်းခြင်းကြောင်းပြတ်သားသက်သေအထောက်အထားရှိသည်သောသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်တွင်အတည်ပြု။ ငါကြေငြာချက်နှင့်မကြာခဏကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ သို့သော်“ ဒေါက်… အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်၎င်းနှင့်အတူနေနိုင်သည်။ စိတ်ကူးတစ်ခုသာဖြစ်လျှင်…ထိုနေရာ၌ဖြစ်ပျက်နေသောအရာတစ်ခုခုကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ခံစားရသည်။ ။ "
OC ဝေဒနာသည်တစ် ဦး အဖြေရရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုမလိုလားအပ်သောကြောင့်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိအမြင်နှင့်စစ်မှန်သောအတွေ့အကြုံများကိုခံစားခွင့်ရရန်အတွက်အကြီးမားဆုံးအတားအဆီးဖြစ်လာသည်။ လိင်ကုထုံးတစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သိထားသည်မှာလူ့အခြေအနေတွင်မိမိ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာကိုအကြွင်းမဲ့သေချာစွာသိရှိရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ လူသားများစွာသည်သူတို့၏ဘ ၀ တွင်အချိန်ကာလအချို့ကိုဖြတ်သန်းပြီးသူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှုများအားမေးခွန်းထုတ်ကြသည်။ ဤပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသောလူအများစုအတွက်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသော်လည်း၎င်းသည် OC ဝေဒနာသည်များ၏အပူတပြင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုသည်အဖြေရှာရန်နှင့်မတူပါ။ ဤသဘာ ၀ မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းဖြစ်စဉ်သည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တွင်ပြုလုပ်သောကြောင့်နှင့် OCD စတင်ခြင်းသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်ဆက်နွယ်သောကြောင့်ဤအထူးသဖြင့် OCD အကြောင်းအရာ၏ဘုံသဘောသဘာဝကိုပိုမိုနားလည်နိုင်သည်။
အဆိုပါ obsessive-compulsive ခွအေနအေအတွင်းမှာပဲတဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာအချို့ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်၏မျှသာမေးခွန်းတစ်ခုကိုတဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ကြောင်းသက်သေပြလာအောင်ဖြစ်လာသည်။ တစ်နည်းမှာ obsessive-compulsive ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေနဲ့သိမြင်မှုမူဘောင်အတွင်းကဒီဂြိုဟ်ပေါ်မှာရှိသမျှလူပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာနှင့် ပတ်သက်. အတိအကျအမှန်တရားတွေနှင့်အကြွင်းမဲ့အာဏာယုံကြည်မှုများရှိသည်။ ထိုကွောငျ့, တဦးတည်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာခိုင်မြဲစွာထူထောင်မဟုတ်ကြောင်းမဆိုဖြစ်နိုင်ချေ, ဒီ-အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပေါ်ပိတ်သိမ်းသို့ရောက်ရှိရန်လေးနက်ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်လာသည်။
ဒါဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်, လိင်တူဆက်ဆံသူတွေကိုအဘို့, လိင်တူဆက်ဆံခြင်းအပေါ်၎င်းတို့၏ယေဘုယျသဘောထားကိုခြိမ်းခြောက်ခံရဖို့ဤမေးခွန်းကို၏အလားအလာနှင့်မဆိုင်ပါဘူးနှင့်။ လိင်တူဆက်ဆံသူများကိုလိင်တူဆက်ဆံသူများကိုဂေးဖြစ်ရန်အလားအလာရှိသူ၊ သို့မဟုတ်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုလက်ခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းသတိထားမိသူများသည်ဤ OCD ပုံစံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အလားတူအလားအလာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်လိင်မှုကိစ္စကိုလက်ခံခြင်းကိုလိင်ဆိုင်ရာလူနေမှုဘ ၀ ပုံစံတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ထိရောက်သောကုသမှုနည်းဗျူဟာမဟုတ်ပါ။ OCD ၏သရုပ်သဏ္ဌာန်များကဲ့သို့ပင် ritualizing ကိုထိန်းသိမ်းရန်တွန်းအားမှာ - ၁)“ မသိသော” မျှဝေခြင်း၏မငြိမ်မသက်အတွေ့အကြုံ၊ ၂) လူတစ် ဦး ၏ဘ ၀ သည်အဖြေပေါ်မူတည်သည်ဟူသောယုံကြည်စိတ်ချမှု၊ (၃) အဖြေရရှိခြင်းသည်အခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုဖြေရှင်းပြီးရေရှည်တည်တံ့သောကယ်ဆယ်ရေးကိုဆောင်ကြဉ်းလိမ့်မည်ဟုအမြစ်တွယ်နေသောယုံကြည်ချက်။ ဤ OC ပုံစံသည်အလွန်ရှာဖွေရန်မဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်ပြtheနာဖြစ်ကြောင်းဥပမာပြသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုသည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်ဆီသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာလိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုလုံးဝလက်ခံခဲ့သောလူငယ်တစ် ဦး သည်ထိုတိုးတက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည် ဖြောင့်မတ်သောသဘောကို၎င်း၊ သူကသူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုကိုလက်ခံရန်သူလုပ်ဆောင်ခဲ့သောအလုပ်များအားလုံးဖြုန်းတီးနေသည်ကိုသူစိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ အကယ်၍သာ သူမသာအမျိုးသမီးများအားခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်းသည်သူ၏လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုထောက်ခံသည့်အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ပါကသူသည်သူ၏သဘာဝနှင့်ပိုမိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောဘဝပုံစံကို ဆက်၍ သွားနိုင်လိမ့်မည်ဟုသူခံစားခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံးတွင်သူသည်အမျိုးသမီးများကိုပိုနှစ်သက်ကြောင်းလက်ခံရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဒီဖြစ်နိုင်ခြေကိုလက်ခံလိုက်ခြင်းအားဖြင့်သူဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးလိင်တူချင်းလိင်တူချင်းဆက်ဆံမှုကိုဆက်လုပ်ခဲ့သည်။
ဤကဲ့သို့ OCD အမျိုးအစားရှိသူများထုံးတမ်းဓလေ့ထုံးတမ်းများသည်မေးခွန်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုရှောင်ရှားရန်ကြီးမားသောပမာဏဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ များစွာသောသူတို့သည်လိင်တူချင်းချစ်သူများကိုမကြည့်တော့ဘဲစိတ် ၀ င်စားမှုသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုတုန့်ပြန်မည်ဟုစိုးရိမ်သောကြောင့်လိင်တူချစ်သူဖြစ်ခြင်း၊ အဖြေမရရှိခြင်းကိုထပ်မံသက်သေထူလာနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်များနှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်း (သို့) လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရှာဖွေခြင်းတွင်ပါ ၀ င်မှုအမြောက်အများရှောင်ရှားရန်မျှော်လင့်ထားသည့်နှိုးဆွမှုတုန့်ပြန်မှုမရှိခြင်းသည်ခြိမ်းခြောက်မှုသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းအပြီးသတ်သက်သေသာဓကဖြစ်လာလိမ့်မည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်စေသောအရာဖြစ်ပြီးမကြာခဏပြတ်တောက်သောသဘာဝအလေ့အထဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်း၌ထုံးတမ်းစဉ်လာများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာလက္ခဏာကိုထူထောင်ရာတွင်အဖြေတစ်ခုရရှိရန်အဆုံးသတ်နိဂုံးချုပ်ခြင်း၊ ရက်စွဲတစ်ခုတွင်ရှိနေခြင်း၊ လမ်းပေါ်လျှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းတို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလျှပ်ကူးစက်များဖြစ်သည်။ လမ်းပေါ်လမ်းလျှောက်နေစဉ်တွင်လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားတစ် ဦး သည်“ ယောက်ျား၊ ထိုလူသည်အဆင်းလှသည်” ကိုသတိပြုမိလျှင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပြီးအလားတူအလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုမှာ“ အိုဘုရားသခင်၊ အဘယ်ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိခဲ့ပါသနည်း” အကယ်၍ တစ်ယောက်ယောက်ကသူတို့ချစ်သောရည်းစားကိုနမ်းကြတော့လျှင်“ မင်းကလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖြတ်သန်းနေတယ်၊ ​​မင်းတကယ်လိုချင်တာနဲ့အခြားမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်သင့်တယ်…” masturbatory အထွတ်အထိပ်မတိုင်မီလေးတွင်အတူတူပင်ဖြစ်သည် လိင်မိတ်ဆွေတစ် ဦး သင်၏စိတ်ထဲပေါ်လာ။ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်အရည်အချင်းမပြည့်မှီသောအားထုတ်မှုများသည်ယေဘူယျအားဖြင့်လိုက်နာရလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကား OCD ၏ဤပုံစံနှင့်အတူလူများအတွက်အလွန်ဘုံကးဖြစ်ကြသည်။
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး သည်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုပြုလုပ်သည့်အရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းသို့မဟုတ်များပြားသောပမာဏကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ လိင်တူမေထုန်၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်မသေချာသောသံသယများ၊ မရေရာမှုများနှင့်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများအကြောင်းသိရှိရသည့်သတင်းအချက်အလက်ပမာဏအကြားပြောင်းပြန်နှင့်ဝိရောဓိဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ အင်္ဂလိပ်လိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဆိုရလျှင်၊ “ သင်လိင်တူချစ်သူဖြစ်ပါကမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း” နှင့် ပတ်သက်၍ အင်တာနက်ကပိုသတင်းအချက်အလက်ပိုမိုပေးလေလေ၊ “ လိင်တူချစ်သူ spiker” သည်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်လာသည်ဟုဆိုလိုသည်။ လိင်တူမေထုန်၏မူလအစနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုရရှိလာသည်နှင့်အမျှ OC ဝေဒနာသည်သည်အပြီးသတ်အဖြေကိုရရှိခြင်းမှ ပို၍ ဝေးကွာသောခံစားမှုကိုခံစားရသည်။ လိင်ကုထုံးအရငါလိင်တူချစ်သူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်မှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ဤအချက်အလက်သည်မေးခွန်းကိုပိတ်ရန် OC ဝေဒနာသည်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်၌ဘာမျှမလုပ်နိုင်ပါ။ ထိုသူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်အချိန်အနည်းငယ်မဖြုန်းပါနှင့်။ အကယ်၍ ဤဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပေါ်လာပါက၎င်းသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားသူတို့၏အဓိကမေးခွန်းနှင့်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာခံစားရရန်ကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းအလွန်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြရန်အကြံပြုသည်။
ကုထုံးအားဖြင့်ပြောရလျှင်၎င်းသည်အလွန်ကုသနိုင်သောပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်လူအများစုကကုသမှုသည်လူ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်နှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကြောင့်ကုသမှုကိုကြောက်ရွံ့ကြသည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဤ OCD ပုံစံကိုကုသရန်လာကြခြင်းဖြစ်ပြီးသူတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပညာရှင်အားသူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုအပေါ်အပြီးသတ်အဖြေပေးရန်အလွန်အမင်းရှာဖွေနေကြသည်။ OCD ကုသမှုတွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိသောစိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များအတွက်၊ ဂေးမဟုတ်သည်ကို client အားအာမခံရန်အဆုံးမဲ့ကြိုးပမ်းမှုများအတွက်အချိန်နှင့်အားစိုက်ထုတ်မှုများစွာဖြုန်းတီးနေသည်။ အခါအားလျော်စွာစိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များသည်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုကြိုးစားရန်ပင်အကြံပြုခဲ့ကြသည်။ ဤသူများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုပြcrisisနာမဟုတ်ဘဲစိုးရိမ်ဖွယ်ရာရောဂါတစ်ခုကိုကိုင်တွယ်နေကြောင်းဖော်ထုတ်ရန်ကျွမ်းကျင်သူများသည်လူတစ် ဦး ၏လိင်မှုဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအဖြေကိုရရှိရန်မဟုတ်ဘဲလူတစ် ဦး ၏မဖြေရှင်းနိုင်သောသဘာဝကိုလက်ခံရန်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။ မေးခွန်း သက်ရှိထင်ရှားသက်သက်သာဖြစ်ခြင်း (ဥပမာ -“ Pure-O”) ကိုကုသခြင်းကဲ့သို့ပင် ဦး နှောက်ကိုတီထွင်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းသည်ကောင်းသောအစဖြစ်သည်။ ဘဝ၏အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းများအနက်မှအဖြေတစ်ခုမျှသာမရှိကြောင်းအမြဲတမ်းသတိပေးမှုအတွက်ခွင့်ပြုရန်“ gay spiker” ကိုဖွင့်ပေးသောရွေးချယ်မှုများကိုအားပေးသည်။ ဤမေးခွန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအပြုအမူဆိုင်ရာနည်းစနစ်များဖြင့်အောင်မြင်စွာကုသခံထားရသောသုံးစွဲသူများအတွက်ကုသမှုအဆုံးတွင်အကောင်းဆုံးကုသမှုအဖြေမှာသူတို့၏လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာမရေရာမှုကိုအပြီးသတ်လက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်“ ငါလိင်တူချစ်သူဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်” ဟူသောမေးခွန်းသည်အကောင်းဆုံးသောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။
၎င်းသည် spike အခင်းအကျင်းအားလုံးကဲ့သို့ပင် spike လက်ခံခြင်း၏အယူအဆသည်ဤ spike ဆောင်ပုဒ်တွင်အဓိကဖြစ်သည်။ ဆူးကိုလက်ခံခြင်းသည်အန္တရာယ်၏မသေချာမရေရာမှုကိုလက်ခံရန်နှင့်အန္တရာယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအဆင်မပြေမှုအဆင့်ကိုလက်ခံရန်တက်ကြွစွာရွေးချယ်ခြင်းပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ စိန်ခေါ်မှုများကိုကိုင်တွယ်ရန်စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းတွင်သင်၏အရင်းအမြစ်များအားလုံးကုန်သွားပြီလားဆိုသည်ကိုသင့်ကိုယ်သင်မေးရန်အခွင့်အရေးယူသည်။ “ လက်ရှိငါကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်သောကရောက်နေမှုတွေနဲ့ငါ့ရဲ့အရင်းအမြစ်တွေအားလုံးကုန်ခန်းသွားပြီလား။ ခံနိုင်ရည်အနည်းငယ်မျှသာကျန်ရှိပါကစိန်ခေါ်မှုနှင့်အတူခံနိုင်ရည်ရှိရန်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ပြန်လည်ခုခံနိုင်မှုအားတိုတောင်းသောကြားကာလခွဲထားရန်အကြံပေးသည်။ ဤကြားကာလအတွင်း၌သင်၏ ဦး နှောက်သည်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သောဆူး၏မဖြေရှင်းနိုင်သောသဘောသဘာဝကိုသတိရရန်ဆန္ဒရှိရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ အဆိုပါဆူးလက်ခံ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကဖယ်ရှားပစ်ရန်မဟုတ်ဘဲထိရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်ပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းကုသမှုခံယူစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်များအား“ သင်သည်လိင်တူချစ်သူလား” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်မေးလေ့ရှိသည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပြုံးပြုံးလေးနဲ့ကြည့်ပြီး“ မသေချာဘူး၊ ”“ ငါမသိဘူး” ဒါမှမဟုတ်“ ကျေးရွာကိုသွားပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်” ဆိုတဲ့လူနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုကျွန်တော်ရရှိခဲ့တယ်။ ” ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်များကိုရှာဖွေရန်မိမိ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုသေချာစေရန်မလိုအပ်ပါ။ လူတစ် ဦး အားရက်စွဲတစ်ခုအကြောင်းမေးရန်လူတစ် ဦး ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုကိုသေချာစွာပြောစရာမလိုပါ။ ဤအလားအလာရှိသောအကျိုးစီးပွားများကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်သူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမည်သည့်အရာနှင့်ပတ်သက်သည်ကိုသေချာစွာသိပြီဟုကောက်ချက်ချရန်အဖြေရှာရန်သူတို့ကိုယ်သူတို့မရှာဖွေပါကအရေးကြီးသည်။ တစ်နည်းပြောရရင်ကုသမှုပြီးဆုံးတဲ့အခါသင်ဟာစတုတ္ထနေ့မှာ“ အချိန်ကောင်း” ရပြီဆိုရင်ဒီအချက်အလက်တွေကိုမသုံးပါနဲ့၊ ဒါကသင်ဟာလိင်တူချစ်သူမဟုတ်ကြောင်း၊ ဒီဟာတွေအားလုံးဟာ OCD ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသေချာစေဖို့ဖြစ်တယ်။
ကုသမှုပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် OCD ပုံစံအားလုံးကဲ့သို့ပင်လက်တွေ့သင်တန်းတွင်ဖောက်သည်သည်အဆင့်ဆင့်ကိုတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမူအကျင့်ကုထုံးတွင်အဆင့်ဆင့်သည်စိန်ခေါ်မှုရှိသောအတွေးအခေါ်များကိုဖော်ထုတ်သည့်တက်တက်ကြွကြွပါ ၀ င်သောအရာများဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ပစ္စည်းများကိုလူတစ် ဦး ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှတ်အသားနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောတုံ့ပြန်မှု (သို့) မေးခွန်းများဖြစ်ပေါ်စေသောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စပ်ဆိုင်သည်။ ပထမအဆင့်မှာလူတစ် ဦး အားလမ်းတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ပြီးလိင်တူဆက်ဆံသူများ၏ဆွဲဆောင်မှုကိုတစ် ဦး မှတစ်ဆယ်အထိနှုန်းထားရှိစေခြင်းဖြစ်သည်။ “ တကယ်တော့ငါသာလိင်တူချစ်သူမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ဘယ်သူ့ကိုအဆင့်သတ်မှတ်မှာလဲ။ လိင်တူချင်းချစ်တာလား၊ အလယ်အလတ်တန်းစားထိတွေ့မှုတွေက Boys လိုမငိုဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ပြတာကိုကြည့်လေ့ရှိတယ်။ ငါမူကားငါ Cheerleader တစ်ယောက်။ လှေကားထစ်တစ်ချောင်းမှာလိင်တူချစ်သူဆန့်ကျင်သူတစ်ယောက်ကသူမဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာခန့်မှန်းနိုင်တယ်။ အောင်မြင်မှု, ငါလိင်တူချစ်သူ spiker WWW.Gay.com နှင့် WWW.comingoutstories.com ကဲ့သို့သောက်ဘ်ဆိုက်များကိုသွားရန်အကြံပြုပါသည်။ ဤတွင် OCD ဝေဒနာရှင်သည်ဖြတ်သန်းသွားသောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ကိုက်ညီသည့်များစွာသောပုံပြင်များကိုကမ်းလှမ်းထားသည်။ ပြီးတော့သင်အကြိုက်ဆုံးလိင်တူချစ်သူ porn ကြယ်ပွင့်ကြီး၏ဓာတ်ပုံ layouts အမြဲရှိသည်။ ကောင်းပြီ၊ မင်းအကြံအစည်ရပြီသေချာတယ်…
OCD ပုံစံအားလုံးကိုကုသသည့်နည်းတူဤအမူအကျင့်လေ့ကျင့်ခန်းများတွင်ပါ ၀ င်သည့်စိတ်နေသဘောထားသည်လေ့ကျင့်ခန်းများကဲ့သို့အရေးကြီးသည်။ OCD ၏ဤပုံစံများကိုပုံမှန်ကုသရာတွင်ပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသောသဘောထားတစ်ခုမှာစိန်ခေါ်မှုများ၊ မရေရာမှုများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသက်မသာမှုကိုလက်ခံခြင်း၏အယူအဆပါ ၀ င်သည်။ ကုသမှုအောင်မြင်မှုရဲ့အဓိကကျတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့“ embrace” ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုဖို့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်။ Embrace ဆိုသည်မှာလူတစ် ဦး ၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုအဆင့်ကိုသည်းခံရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆူးနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်သိမြင်မှုခြိမ်းခြောက်မှုကိုလက်ခံရန်တက်ကြွစွာရွေးချယ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ လူတစ် ဦး ၏စိန်ခေါ်မှုများကိုလက်ခံရန်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုတိုးမြှင့်သည့်နည်းလမ်းများသည်အရင်းအမြစ်များအားလုံးအားအသုံးချခြင်း၊ ပျောက်ကွယ်ခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိကိုယ်ကိုရိုးသားစွာမေးခွန်းထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ -“ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကြိုးကုန်ခါနီးတွင်ရှိသလား။ သို့မဟုတ်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်မငြိမ်သက်သောအတွေ့အကြုံကိုအနည်းဆုံးဆယ်မိနစ်ခန့်သည်းခံရန်လုံလောက်သောခံနိုင်ရည်ရှိသလော” ကဲ့သို့သောမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွက်စိန်ခေါ်မှုအားစီမံခန့်ခွဲရန်ရွေးချယ်ခြင်းပြုလုပ်ရာတွင်ထိုအချိန်ကာလအတွင်းစိန်ခေါ်မှုရှိနေသေးကြောင်းကိုအမြဲတမ်းသတိပေးရန်လိုသည်။ ဤနေရာတွင်လူတစ် ဦး ၏ရည်မှန်းချက်သည်မေးခွန်းများ၏သတိပေးချက်များကိုဖယ်ရှားရန်မဟုတ်ဘဲအဆင်မပြေမှုသတိပေးချက်များကိုဖယ်ရှားရန်မဟုတ်ဘဲထိုသတိပေးချက်များအတွက်နေရာယူရန်နှင့်စီမံရန်ဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါ။
ငါ့နာကျင်မှုသည် OCD ရှိခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်လိင်တူချစ်သူကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၏ရလဒ်လား။
နောက်ဆုံးတွင်ကုသမှုပြုရာတွင် OCD ရှိသူတစ် ဦး ကိုင်တွယ်ရမည့်အန္တရာယ်အရှိဆုံးမေးခွန်းမှာ“ ငါ OCD တကယ်ပဲရှိသလား၊ ဒါမှမဟုတ်ငါခံစားခဲ့ရတာတွေကသဘာဝကျကျဖြတ်သန်းသွားတဲ့အရာတစ်ခုကိုငါတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ၊ လိင်တူဆက်ဆံသူလား ' အဆင့်ဆင့်၌ဤနောက်ဆုံးတွင်လက်တွေ့အောင်မြင်မှုအတွက်နောက်ဆုံးအတားအဆီးဖြစ်လာသည်။ ဤမေးခွန်း၏ခိုင်လုံသောအလားအလာနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းတစ်ခုအားတိကျစွာအဖြေပေးရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ နောက်ဆုံးတွင်လူတစ် ဦး သည်၎င်းတို့သည်ကုထုံးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါ ၀ င်ရန်ဆန္ဒရှိမရှိရွေးချယ်ခွင့်နှင့်သူတို့၏လိင်မှုဘ ၀ တွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားနေသောအရာအပေါ်ပျောက်ဆုံးနေနိုင်သည့်အန္တရာယ်ကိုလက်ခံရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ OCD ၏အဓိကလှုံ့ဆော်မှုမှာစိုးရိမ်စိတ်ကိုအခြေခံသောကြောင့်အတွေ့အကြုံရှိသည့်ဆရာဝန်၏ပြသနာသည်အခြားတိုးတက်ခြင်းလောသို့မဟုတ်ထွက်ပေါ်လာမည့်အကျပ်အတည်းဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယေဘုယျအားဖြင့်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးမှုများရှိသည်။ “ ငါလိင်တူချစ်သူလား” ဟူသောအရေးကြီးမေးခွန်းကိုအဖြေရရန်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာသည်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ လိင်တူမေထုန်ဟာပူဇော်သက္ကာအတွက်မပါကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းအချက်ပြဖြစ်ပါတယ်။
ကုထုံးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအဖြစ်များသောဖြစ်ရပ်များကိုငါ“ backdoor spike” ဟုရည်ညွှန်းသည်။ backdoor spike ဆိုသည်မှာစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးသောမေးခွန်းနှင့်ဆက်နွယ်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုမခံစားရတော့သောခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်သည်။ OCD ဝေဒနာသည်အများစုအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းသည်တစ်ခုခုလွဲမှားနေကြောင်းစိတ်ချစေသည်။ ကျွန်ုပ်၌ OCD ရှိကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချစ်သူမဟုတ်ကြောင်းမည်သို့သိနိုင်သနည်း။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေးခွန်းတစ်ခုကကျွန်တော့်ကိုအရမ်းစိတ်ပူစေတယ်။ ” ထို့ကြောင့်တစ်စုံတစ် ဦး သည်သူတို့၏ကုထုံးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်သောအခါ၎င်းသည်ဆူးနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုမကြုံတွေ့ရသောအခါမေးခွန်းသည်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာမရှိဘဲအမှန်တကယ်ရှိကောင်းရှိမည်ဟူသောခြိမ်းခြောက်မှုသည်အသစ်တစ်ခုလုံးဖြစ်လာသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်လူနာများသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိတော့သောကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်လာကြသည်။ “ အခြားနေ့ကကျွန်မရဲ့အခန်းဖော်ကိုသူ / သူမအတွင်းခံအဝတ်အစားတွေမှာတွေ့ခဲ့တယ်။ အူဘုရား၊ …ငါစိုးရိမ်တကြီးမရှိခဲ့လို့ငါတကယ်စိတ်ဝင်စားခဲ့လို့ငါထင်ခဲ့တာလား?!”
လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်မှုမေးခွန်းကိုအနီးစပ်ဆုံးခန့်မှန်းသည့်အနည်းဆုံး spike themes နှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာ“ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လိင်တူချစ်သူဖြစ်လို။ ကျွန်ုပ်သိရုံသာလိုအပ်သော” ရှားပါးသောဆူးဖြစ်သည်။ ရှားပါးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အိပ်မပျော်သောညများ၌များစွာသောအိပ်မက်များကိုအသုံးပြုပြီးအဆုံးမဲ့အချက်အလက်များကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မိပြီးသူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုအားသေချာစွာဖြေဆိုရန်အလင်းပေးလိမ့်မည်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုစွန့်ခွာသွားသောကလေးများနှင့်ကလေးများအကြောင်းဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာသေးမီကရေးသားခဲ့သောစာအုပ်သည်ဤဆူးခေါင်းစဉ်ကိုပိုမိုမြင်သာထင်သာဖြစ်စေမည်ဟုသေချာသည်။ အခြားအများသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာ“ ကျွန်ုပ်သည်ကလေးသူငယ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအယုံအကြည်ကင်းမဲ့သူဖြစ်နိုင်သည်။ ကလေးငယ်များကိုတွေ့သောအခါသို့မဟုတ်သူတို့ရင်ခွင်ပေါ်၌ကစားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပေါင်ခြံမှတိကျသောရောင်ရမ်းခြင်းခံစားမှုကိုခံစားရသည်။ ” အဆိုပါပေါင်ခြံဒေသ၌ဤအမှန်တကယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံ၏တည်ရှိမှု (ပေါင်ခြံတုံ့ပြန်မှု) ၏တည်ရှိမှုနှင့်အဓိပ္ပါယ်အတွေ့အကြုံအတွက်ဖောက်ပြန်၏သက်သေပြတည်ရှိခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်
ဆက်နွယ်သောအင်္ဂါရပ်, သို့သော်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဆူး, ကျူးလွန်သောဆက်ဆံရေးအတွက် OCD နှင့်အတူသူတို့အဘို့, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမျှတမှုမရှိခြင်းရှိနေသော်လည်း, ဆက်ဆံရေးအတွက်ဆက်လက်များအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရေပန်းစားသူနှင့်ရေရှည်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိသူများသည် ၄ ​​င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ချိတ်ဆက်မှုအဆင့်သည်လုံလောက်မှုရှိမရှိသက်သေပြရန်ကြိုးစားလေ့ရှိသည်။ လိင်တူချစ်သူတွေအတွက်ဆက်ဆံရေးမြှင့်တင်ရေးဆူးဟာသူတို့ရဲ့ spike menu ရဲ့မတူကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာမဆန်းဘူး။ spike ဆောင်ပုဒ်သည်သူတို့၏ဆက်နွယ်မှုကိုသက်သေပြရန်ပါ ၀ င်သူများသည်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့၏စိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်မှုကိုတိုင်းတာမှုအပေါ်တွင်မှီခိုအားထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ထိုဆက်ဆံရေးတွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်သင့်သည်မဖြစ်သင့်သည်။ ဒီဆူးခေါင်းစဉ်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များလည်းသူတို့သို့မဟုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဆက်ဆံရေးကိုဖွဲ့စည်းသော "မှန်ကန်သော" အရည်အသွေးတွေဖြစ်ယုံကြည်သောအရာကိုအတောမသတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါလိမ့်မယ်။ ဒီ spike ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအများစုရင်ခုန်စရာအကျိုးစီးပွားအဘို့မိမိတို့စိတ်ခံစားမှုပြင်းထန်မှုတရားမျှတအာရုံစိုက်ပါ။ ထို့အပြင်ကလေးသူငယ်များ၊ မိဘများနှင့်ဘုရားသခင်ပင်လျှင်မိမိ၏ခံစားချက်များ၏လုံလောက်မှုသည်ဤ OCD ပုံစံအောက်ရှိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဏုကြည့်မှန်ပြောင်းအောက်တွင်ကျရောက်နိုင်သည်။
လူတစ် ဦး ၏စိတ်ခံစားမှုအတိုင်းအတာကိုဖတ်ခြင်း
ဒီဆူးခေါင်းစဉ်နှင့်လူတစ် ဦး သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုအသုံးပြုရန်မိမိ၏ကတိက ၀ တ်ကိုမှန်ကန်ကြောင်းပြသရန်ကြိုးစားသောအခါအသုံးအများဆုံးရလဒ်မှာဘာမျှမခံစားရခြင်းသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။ OCD ဝေဒနာသည်သည်သူသို့မဟုတ်သူမအနေဖြင့်သူသို့မဟုတ်သူမနှင့်အတူပြည့်စုံမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရသည်ကိုတွေ့ရသောရင်းနှီးသောအချိန်များ၌ဤသဘောပေါက်ခြင်းနှင့် တွဲဖက်၍ တိုးပွားလာသောလှုံ့ဆော်မှုအတွေ့အကြုံသည်အငွေ့ပျံသွားသည်။ လူတစ် ဦး ၏နှိုးဆွမှုအဆင့်ကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်မူလအတွေ့အကြုံကိုဖယ်ရှားရန်ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ဝိရောဓိဖြစ်စေသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပြောရလျှင်လူတစ် ဦး ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်ပြမှုသည်“ မှန်ကန်သော” သူနှင့်အတူရှိကြောင်းပြသရန်သက်သေပြရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်ချက်အပေါ်အာရုံထားသောအခါစိုက်ထူမှုများဆုံးရှုံးသွားပြီးချောဆီအရည်ပျော်သွားသည်။ နောက်ဆုံးတွင်လူတစ် ဦး ၏ဆက်ဆံရေးတွင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ဆက်နွယ်မှုတွင်ကျန်ရှိနေမှုကိုတရားမျှတသည့်အဆုံးမဲ့ variable များသည်မော်ဒယ်လ်ဖွံ့ဖြိုးရန်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်အခြားသူများအားယုံကြည်စိတ်ချစွာလမ်းညွှန်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်လက်တည်ရှိနေရန် (သို့မဟုတ်) ဆက်ဆံရေးကိုရပ်တန့်ရန်အတွက်“ မတရားသောရွေးချယ်မှု” ၏အယူအဆနှင့်အတူကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဤစကားစုကဆိုလိုသည်မှာလူတစ် ဦး သည်အခြားသူတစ် ဦး အားဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ တစ်ခုသည်အဆုံးမဲ့ရူပါရုံများကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ရန်သို့မဟုတ်ကျန်ရှိနေမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်ကို အကြောင်းပြ၍ မရပါ။ ထို့ကြောင့်“ အဖြေမရှိ၊ ရွေးချယ်မှုသာရှိသည်” ဟူသောစကားစုကိုဆိုလိုသည်။
အကြှနျုပျ၏ One နဲ့သာလျှင်ရှာဖွေခြင်း
OCD ဝေဒနာသည်အားလုံးသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်များကိုတရားမျှတမှုမရှိကြောင်းသက်သေပြရန်တွန်းအားတစ်ခုရှိသည်။ OCD ရှိလူအများစုကသူတို့နာကြည်းစေသောသဘောသဘာဝသည်အဓိပ်ပါယျမရှိဟုနာကျင်စွာသတိပြုမိကြောင်းအလွယ်တကူဝန်ခံလိမ့်မည်။ ဆက်ဆံရေးမျှတမှု spikes နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအကြား, သူတို့ရဲ့အထူးသဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏အဓိပ်ပါယျမရှိသောသဘောသဘာဝနှင့်ပတ်သက်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားလျော့နည်းဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အနောက်နိုင်ငံများအနေဖြင့်ဆက်ဆံရေးတွင်အဘယ်အရာဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သောအချစ်ဇာတ်လမ်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နတ်သမီးပုံပြင်များနှင့်လူကြိုက်များသောမီဒီယာများကချစ်ခင်တွယ်တာမှုများကိုအစဉ်အမြဲကမ္ဘာမြေလှုပ်ရှားမှု၊ မီးရှူးမီးပန်းများအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူနှင့်အတူတူနေခြင်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိနေသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းဖော်ပြမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစာစားချင်စိတ်ကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ရရှိစေပြီးကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အနည်းဆုံးအခြားလူတစ် ဦး ရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှာပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဆက်နွယ်မှုတိုးပွားများပြားသောလူပုဂ္ဂိုလ်များသည်သူတို့၏ဘ ၀ အတွေးအခေါ်တွင်သိသိသာသာပိုမိုစုံလင်လာသည်။ ဤသည်ပြီးပြည့်စုံသောသဘောထားသည်အခြေခံကျသောမေးခွန်းအချို့၏အဖြေများသည်မှန်ကန်သောလူနှင့်မှန်ကန်မှုရှိမရှိသက်သေပြနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်စေသည်။ မေးခွန်းများတွင်ဥပမာ -“ ငါသူ့ကိုငါချစ်သလား။ ”“ သူမကငါ့အတွက်မှန်ကန်သလား” -“ ငါဟာတစ်ယောက်ယောက်ကိုကောင်းကောင်းရှာတွေ့နိုင်မယ်လို့မယူဆသင့်ဘူး၊ perfectionism သည်ဘဝ၏အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်လျှင် web site မှ (The Right Stuff) ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရန်စဉ်းစားနိုင်သည် (WWW.OCDOnline.com) ။
OCD ဝေဒနာသည်၏စိတ်သည်နိဂုံးချုပ်ရန်အလွန်ပင်အပူတပြင်းဖြစ်နေသောကြောင့်လူတစ် ဦး သည်မိမိ၏ခံစားချက်များကိုအတည်ပြုရန်မိမိ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုမကြည့်နိုင်ပါ။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွင်ဆက်လက်ရှိနေရန်အတွက်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကိုရှာဖွေရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်စိတ်သည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်သုံးအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးကဲ့သို့ပြုမူပြီးကျေနပ်အားရမှု၏အထွေထွေအတွေ့အကြုံများကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်အစားထိုးသည်။ ဒီဆူးခေါင်းစဉ်နှင့်ပါ ၀ င်သူများသည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတွင်းရှိအသေးစားချွတ်ယွင်းချက်များကိုအထူးသဖြင့်မိတ်ဖက်မိတ်ဖက်မျက်ခုံးများ၏ထူခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့၏မိတ်ဖက်များ၏အရေပြားအလွန်အမင်းခြောက်သွေ့ခြင်းတို့ကိုအာရုံစိုက်လေ့ရှိသည်။ ရယ်မောခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဟာသအပေါ်တုံ့ပြန်မှုသည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ဟာသကိုလုံလောက်သောအဖြေဟုတ်မဟုတ်သိရှိရန်ကြိုးစားခြင်း၌ပင်မေးခွန်းများပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ "ဘုရားရေ! သူပြောတာကိုသူကရယ်စရာလို့မထင်ဘူး၊ သူနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေတာလဲ။ ” သတ်သတ်မှတ်မှတ်အဖြေတစ်ခုရရန်သူတို့ကိုတက်ကြွစွာမရှာသရွေ့စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုခံစားချက်သည်သဘာဝအရဆက်နွယ်မှုလမ်းစဉ်တွင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ရလဒ်အနေနှင့်၊ ဆက်ဆံရေးပင့်ကူ၏စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုကိုသူသို့မဟုတ်သူမ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွန်အဖျားတွင်သာတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။
မရှိခြင်းသည်နှလုံးကို fonder ကြီးထွားစေသည်
လူတစ် ဦး ၏ကတိက ၀ တ်ပြုမှု၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းထန်မှုကိုတိုင်းတာရန်ဤအပူတပြင်းလိုအပ်ချက်၏နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်လူတစ် ဦး ၏ဆက်ဆံရေးတွင်ဆက်လက်ရှိနေရန်ရွေးချယ်မှုကိုအကြီးအကျယ်နှောင့်ယှက်နိုင်သည်။ လူအများကသူတို့၏ကတိက ၀ တ်များအဆုံးသတ်သောအခါအဆုံးမဲ့စိတ်သောကရောက်မှုသံသရာကိုရပ်တန့်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများသည်ဆက်ဆံရေးသည်ဆုံလည်တံခါးတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရန်အမြဲတမ်းသွေးဆောင်မှုသည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ပြတ်တောက်သွားလျှင်မည်သည့်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိမည်ကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤဆူးခေါင်းစဉ်နှင့်ပါ ၀ င်သူများကသူတို့၏ရွတ်ဆိုသံများကြောင့်ဆက်ဆံရေးအတွင်းအခြေခံအားနည်းချက်ရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဆန့်ကျင်တွင်, ဒီဆက်ဆံရေး၏အများစုသည်အတော်လေးကျန်းမာလမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဤစိတ်သဘောထားကသိသာထင်ရှားသည့်အခြားသူများစွာသည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏စဉ်ဆက်မပြတ်သံသယများရှိနေသော်လည်းဆက်ကပ်အပ်နှံထားခြင်းကိုရှင်းပြသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာခံစားနေရသော်လည်းလက်ထပ်ရန်ရွေးချယ်မှုသည်မရေရာမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်ရံဖန်ရံခါပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ငါဆင်ခြင်တုံတရားဖြစ်ခြင်းငါထိုးကျပြီကတည်းက, nagging မေးခွန်းတစ်ခုကိုအနီးကပ်မှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်အိမ်ထောင်ရေးနှင့်ခွဲနေခြင်းသည်ပင်အလုပ်ကိုအဆုံးသတ်စေသည်။ ဤသည်ကလူနာအတော်များများသည်အဆက်ပြတ်ပြီးနောက်ငါးနှစ်အထိကုထုံးကိုစတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုသည်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်နီးကပ်စေရန်ကြိုးစားခြင်းကိုရှင်းပြသည်။
“ မရှိခြင်းကနှလုံးကိုပိုမိုနှစ်သက်လာစေသည်” ဟူသည့်စကားသည်အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်လူတစ် ဦး သည်ပြိုကွဲရန်တိုက်တွန်းခြင်းအားဖြင့်လျှောက်သွားသောအခါပျောက်ဆုံးသွားသောအရာများကိုသဘောပေါက်ခြင်းသည်လက်စားချေခြင်းဖြင့်ပြန်လာသည်။ ဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်ခဲ့ကြသူ OCD ၏ဤပုံစံနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များမကြာခဏရှေးခယျြမှုတရားမျှတခြင်းရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်။ ရိုင်းစိုင်း။ ဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်ပြီးနောက်စိတ်သည်အကောင်းမြင်အမှတ်တရများကိုသာအလွန်ရွေးချယ်ပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်လာပြီးအပျက်သဘောဆောင်သောအချိန်ကာလများကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီစေသည်။ ဆက်ဆံရေး၌ရှိမရှိမရှိနှင့်ပတ်သက်။ "အဖြေကို" ရတဲ့နှင့်ဆက်စပ်သဘာဝပnaturalိပက္ခကြီးမားသည်။ OCD ပါဝင်ပါကဤစိတ်တိုးပွားမှုပမာဏသည်ညှဉ်းဆဲမှုအထိတိုးပွားစေသည်။ သူတို့၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစိတ်ဖြင့်၊ ဆက်ဆံရေးသည်အမှန်တကယ်ကုန်ဆုံးပြီဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိသူများသည်၎င်းအားပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန်နောက်ထပ်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ကျိုးနပ်နေသေးမလားစဉ်းစားဆင်ခြင်။ နာရီပေါင်းများစွာအချိန်ယူနိုင်ကြသည်။ ဤစွဲလမ်းမှု၏ဒြပ်စင်သည်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သည့်အခါအချိန်၏သဘာဝကုထုံးသက်ရောက်မှုများကိုဖယ်ရှားပစ်လေ့ရှိသည်။
သင့်ရဲ့နှစ်သက် Leave မှငါးအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်ဖြစ်ရမည်
အခြေခံအားဖြင့်ကောင်းသောဆက်ဆံရေးကိုရပ်စဲရန်စဉ်းစားသူများအတွက်အသုံးအများဆုံးအကြောင်းပြချက်မှာသူတို့နှင့်အတူပါ ၀ င်ခြင်းမရှိဘဲနှစ် ဦး စလုံးရှိစဉ်မျှော်လင့်ထားသည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လိုချင်မှုမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဤခံစားချက်မရှိခြင်းကြောင့်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံ (စိုးရိမ်စိတ်၊ လူတစ် ဦး သည်ဆက်ဆံရေးကိုသာအဆုံးသတ်လိုပါကအဆိုပါရောဂါသည်သက်သာရာရစေမည်ဟုကတိပေးပါသည်။ ဒီဆူးခေါင်းစဉ်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအကြားယူဘုံအနေအထားက "အခြားလူတိုင်းမိတ်ဖက်ကိုချစ် '' ခံစားရ '' ရရှိသည်ကတည်းကငါသည်လည်းအလားတူလုပ်နိုင်ဖြစ်သင့်ကြောင်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပုံရသည်" လူတွေကမကြာခဏစဉ်းစားတွေးတောခြင်းနှင့်ရံဖန်ရံခါအခြားသူတစ် ဦး ဦး နှင့်အတူရှိပါကသူတို့ကွဲပြားခြားနားခံစားရမယ်လို့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု။
လူများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောအခြားဘုံကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုများစွာမှာအဆုံးမဲ့အပူတပြင်းသံသရာလည်ခြင်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ “ တစ် ဦး တည်းသောဝိညာဉျကြောဖကျဖွစျသူ” ကိုယုံကွညျခွငျးကသူတို့နှငျ့အတူရှိသူတစျ ဦး သညျနညျးတူနထေိုငျပါသညျဟုခံစားရရန်စိတျဝငျစားစှာစိတျဝငျစားစသေညျ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဆက်နွယ်မှု၏သဘာဝမတူကွဲပြားမှုများသို့အလွယ်တကူအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည့်အသေးအဖွဲကွဲပြားခြားနားမှုများသည်အလွန်ပြင်းထန်သောအငြင်းပွားစရာအချက်များဖြစ်လာသည်။ ဥပမာ“ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားဟာသဉာဏ်ကိုကျွန်ုပ်အပြည့်အဝမလေးမခန့်ထားလျှင်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်တူသူတစ် ဦး ကိုရှာဖွေခြင်းသည်ပိုကောင်းမည်မဟုတ်ပါ။ နောက်ထပ်အများလက်ခံသောလွဲမှားသောယူဆချက်မှာ“ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူတစ် ဦး ကိုဆွဲဆောင်နိုင်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် 'ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားခြင်း' မဟုတ်ပါသို့မဟုတ်သူမအားသူမလုံလောက်မှုမရှိဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ " လူတစ် ဦး သည်ကျန်းမာသောဆက်ဆံရေးတွင်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုဆွဲဆောင်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်ကိုသတိပြုခြင်းသည်အရေးကြီးသောအခြေခံဖြစ်သည်။ လူတစ် ဦး ၏ဝိညာဉ်ကြင်ဖော်သည်နည်းလမ်းအားလုံးနှင့်အပြည့်အဝလိုက်ဖက်သင့်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ်ထူးခြားစွာလုံးဝဆွဲဆောင်မှုရှိသင့်သည်ကိုယုံကြည်ခြင်းသည်ထိုသူအားသင်၏“ စစ်မှန်သော” ဝိညာဏအိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မရေရာမှုများနှင့်မလုံခြုံမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာဤဆူးခေါင်းစဉ်၏ပျံ့နှံ့မှုအကြောင်းအရင်းမှာလူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း၏ဘုံအယူအဆမှာသူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားရရန်ဖြစ်သည်။ လူတစ် ဦး ၏“ စစ်မှန်သောခံစားချက်များ” ၏လမ်းညွှန်မှုကိုခံယူခြင်းသည်မီဒီယာနေရာအမျိုးမျိုးတွင်လူကြိုက်များသောအချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စာရေးသူ M. Scott Peck က The Road Less Traveled စာအုပ်တွင်ရေးသားထားသည်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မိမိ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အား ဦး စားပေးရွေးချယ်ရန်နှင့်ရွေးချယ်မှုများကိုကတိက ၀ တ်ပြုရန်ရွေးချယ်သောကြိုးပမ်းမှုအပေါ်တွင်အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကြီးမားသောအတွေ့အကြုံတစ်ခုပေါ်တွင်အခြေခံထားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ကြောင်းသူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတွင်လူအများစုသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်အတန်းကိုကြိုတင်မခံစားမိသောကြောင့်ဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ မကြာခဏဆိုသလို“ မင်းကိုငါချစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူး” ဟူသောဖော်ပြချက်သည်ဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ရန်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်လာသည်။
ဤ OCD ပုံစံဖြင့်ကုသမှုနည်းဗျူဟာများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှုမြင့်တက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သောကုသမှုနှင့်များစွာဆင်တူသည်။ မသေချာမရေရာမှုများနှင့်အတူနေထိုင်ခြင်းကိုတဖြည်းဖြည်းလက်ခံခြင်းနှင့်ပြတ်ပြတ်သားသားအဖြေမရသောနာကျင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိရန်ရွေးချယ်ခြင်းတို့သည်ဤကုသမှုများ၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ကုထုံးဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်၏အနှစ်သာရကိုဖမ်းယူဖော်ပြသောမကြာခဏဖော်ပြသောစကားစုကို“ သင်သည်ရွေးချယ်မှုသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံ၌နေထိုင်နေပါသလော” ဟူသောမေးခွန်းကိုဖော်ပြသည်။ အတွေ့အကြုံ၌နေထိုင်ခြင်းဟူသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေခြင်း၏အကြောင်းပြချက်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်ရန်လူတစ် ဦး ၏ခံစားချက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဒီ OCD အမျိုးအစားရှိသူများအနေဖြင့်အတွေ့အကြုံ၌နေထိုင်ခြင်းသည်အဆက်မပြတ်ဆက်နွယ်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်နွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နိဂုံးချုပ်ရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှတမှုကိုရှာဖွေခြင်း၏အဆုံးမဲ့သံသရာကိုကြာရှည်စေသည်။ “ ရွေးချယ်မှု” တွင်နေထိုင်ခြင်းသည်လက်ခံခြင်း၏အနှစ်သာရကိုဖမ်းယူသည်။ ဤတိုးမြှင့်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤလူနှင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာမရေရာမှုကိုလက်ခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တရားမျှတမှုမရှိသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ လူနာများအနေဖြင့်မိမိတို့၏ဆက်နွယ်မှုအတွင်းဆက်ရှိနေရန်ဆန္ဒရှိမည်၊ မရှိမည်ကိုမေးမြန်းရန်တောင်းဆိုသည်၊ သူတို့၏ကတိကဝတ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲသူတို့၏ရွေးချယ်မှုကိုတရားမျှတရန်အတွက်လိုအပ်သောခံစားချက်များကိုလိုအပ်သည်။ တက်တက်ကြွကြွဆောင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ဆူးရင်ဆိုင်ခြင်း, အစားထို့နောက်၎င်း၏ကျူးကျော်စောင့်ဆိုင်းစောင့်ဆိုင်း, ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားပေးအားမြှောက်နေကြသည်။ အများအားဖြင့်အိမ်တွင်းပြုသည့်ကုထုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုသည်အိတ်ကပ်ထဲ၌အညွှန်းကဒ် ၁၀ လုံးကိုသယ်ဆောင်ရန်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အညွှန်းကဒ်တစ်ခုစီသည်လူတစ် ဦး ၏ဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ရန်အတွက်သီးခြားအကြောင်းပြချက်ကိုဖော်ပြထားသည် ကဒ်တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်နေ့လျှင် ၁၀ ကြိမ်ပြန်လည်သုံးသပ်စဉ်လူတစ် ဦး သည်ဆူးတစ်ခုစီ၏ပြင်းထန်မှုပမာဏကိုတိုင်းတာသည်။ ဒုတိယအချက်မှာသူသည်ပထမနံပါတ်ဘေးတွင်သူတို့သည်သူတို့ရဲ့ spike theme ကိုကမ်းလှမ်းရန်ရွေးချယ်သောခုခံမှုအဆင့်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဤဒုတိယနံပါတ်သည်အလွန်အရေးကြီးပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ဤကုထုံးတစ်ခုလုံး၏အခြေခံကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အခြေခံအားဖြင့်မည်သည့်ဆူးခေါင်းစဉ်ကိုမဆိုခုခံနိုင်မှုနည်းလေလေအခွင့်အလမ်းပိုများလေလေဖြစ်သည်။ ဤအတွေးအခေါ်များကိုမိမိကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ရန်နေ့စဉ်ထပ်ခါတလဲလဲရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်းသည်နေရာယူနိုင်သည်၊ မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေသောသတိပေးချက်များသည်ကြားနေဖြစ်လာသည်။ “ သင်၏စစ်မှန်သောခံစားချက်နှင့်အညီသွားခြင်း” နှင့် ပတ်သက်၍ လူ့အဖွဲ့အစည်းကပြင်းပြင်းထန်ထန်အားပေးအားမြှောက်ပြုသည့်ခိုင်လုံသောခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်များအားလုံးကိုလွှတ်ပေးရန်ဆန္ဒရှိခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
အစဉ်အလာအပြုအမူဆိုင်ရာကုသမှုကိုအောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ ပထမတစ်ခုမှာမိမိ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူကျန်ရှိနေမှုနှင့်ဆက်စပ်သောခြိမ်းခြောက်မှုအတွေးအခေါ်များအဆင့်ဆင့်နှင့်ဆက်စပ်သောအဆင့်ဆင့်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒီစာရင်းထဲမှာလက်တွဲဖော်အတွင်းရှိအားနည်းချက်များသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အားနည်းချက်များကိုကိုယ်စားပြုသောအရာများသည်ဆက်ဆံရေးတွင်မပါ ၀ င်ခြင်းကို အကြောင်းပြ၍ ဖြစ်နိုင်သည်။ လူတစ်ယောက်ကိုမတောက်ပသည့်အလင်းရောင်ဖြင့်ပုံဖော်ထားသောမိတ်ဖက်တစ် ဦး ၏ရုပ်ပုံကိုသယ်ဆောင်ထားခြင်းက OCD ဝေဒနာသည်အားချစ်ခြင်းမေတ္တာမပြည့်စုံခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်နေခြင်းအားဖော်ထုတ်ရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောအလိုအလျောက်တန်ပြန်ထိုးနှက်သည့်လုပ်ရပ်ကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းသည်အပြုသဘောဆောင်ခြင်းဟူသောနိယာမကိုဤအတွေးများ၏သားကောင်ဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးနိုင်သည်။
ဒီ spike ဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ, လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်ပါဝငျမကြာခဏ spikes နှင့် Self- ဝိညာဏ်၏ဖန်တီးမှုအတွက်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤဆူးခေါင်းစဉ်နှင့်ပါ ၀ င်သူများသည်မိမိ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားအပျော်အပါးဖြင့်သာအဓိကထားအာရုံစိုက်ပြီးသူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်သည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြင့်တုန့်ပြန်မှုရှိ၊ လုံခြုံစိတ်ချရသောဆက်နွယ်မှုများနှင့်အညီအပြုအမူဆိုင်ရာရင်းနှီးသောအပြုအမူများတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အတူ OCD ဝေဒနာရှင်အားမျှော်လင့်ထားသည့်နှိုးဆွမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောမေးခွန်းများတိုးပွားလာစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ နူးညံ့သောအနမ်းနှင့်စတင်ရန်နှင့် OCD မဟုတ်သည့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး ရှိခြင်းအားပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောဖြင့်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်“ ဒါဆိုရင်ကလေး၊ ဒါကမင်းအတွက်ဘယ်လိုနေလဲ။ ကမ္ဘာကြီးလှုပ်ရှားလာတယ်လို့ခံစားရသလား။ အသုံးချရန်ထိရောက်သောအစကို item ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အမွေဆက်ခံမှုသည်လိင်မှုကိစ္စပိုမိုမြင့်တက်လာနိုင်ပြီးထိခိုက်နစ်နာသောမိတ်ဖက်သည်လိင်မှုနှိုးဆွသောနည်းဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမကြိုးစားပါ။ “ မင်းရဲ့လည်ချောင်းမှာငါးသေချင်တယ်။ ကောင်းပြီ…မင်းပုံရပြီ…
ငါနဲ့လိင်တူချင်းချစ်တဲ့သူတွေကိုငါမကြာခဏအသိပေးတယ်၊ အကြောင်းပြချက်ကတော့ကုသမှုအဆင့်ဆင့်ကိုတက်လှမ်းရာ၌သင်ဖန်တီးမှုနှင့်စွန့်စားမှုများဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီဆူးနှင့်အတူကုထုံးအောင်မြင်မှုနှုန်းသည်အလွန်မြင့်မားသည်။ ဒီအလွန်ရှည်လျားသောဆောင်းပါးသည်ဤ spike themes နှစ်ခု၏ထူးခြားသောသဘောသဘာဝကိုသိသိသာသာအလင်းဖြာပေးခဲ့သည်မျှော်လင့်ပါတယ် အထူးသဖြင့်နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ ဤဆူးခေါင်းစဉ်များသည်“ စစ်မှန်သောဘဝ” ပြforနာများအတွက်အလွယ်တကူလွဲမှားစွာခံရပြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိဤတိုးပွားလာသောမေးခွန်းများ၏အဖြေကိုလူတစ် ဦး ၏အတွေ့အကြုံအရမှားယွင်းစွာရရှိနိုင်သည်ဟုယူဆကြသည်။ သို့သျောလညျး, ဒီပြreliableနာများကိုကုသရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ထိရောက်သောကုသမှုရရှိနိုင်ကြောင်းသိစေပါ။